Maxay Tahay Sababtoo ah Xoog u sheegashada Taageerayaasha Anime waa wax caan ah (Sida loola macaamilo) - Kale
Cagajuglaynta Bulshada Anime, iyo Sida ay Taageerayaasha Anime ula macaamili karaan
Xoog u sheegashada taageerayaasha anime waa wax caan ku ah bulshada anime. Aniguna ma ihi kaliya ka hadlida dadka ka baxsan bulshada xoog u sheegashada taageerayaasha anime.
animes meesha dubku ka fiican yahay
Waxaan sidoo kale ka hadlayaa taageerayaasha bulshada dhexdeeda ah xoog sheegasho taageerayaasha kale ee anime.
Waxaad u maleyneysaa in dadka qaarkiis ay sifiican u ogaan karaan, iyaga oo tixgelinaya in ay u cagajugleeyeen kuwa kale iyagoo jecel anime. Laakiin taasi maahan.
Had iyo jeer waxay ku dhacdaa goobaha sida:
Iyo dabcan - boggaga internetka iyo baloogyada qaarkood, haddii loo oggol yahay inay dhacaan.
Kuma koobna anime, laakiin waa fandoms khaas ahaan.
Khuseeya: Fandomooyinka Anime ee ugu Fiican Halka Taageerayaashu ay inta badan wax ku ool yihiin
Maxay taageerayaasha anime ugu cagajugleeyaan kuwa kale bulshada anime:
1. Ma aqbali karo kala duwanaanshaha fikirka
Taageerayaasha Anime ee aan awoodin inay aqbalaan kala duwanaanshaha fikradda waa kuwa xoogsheegasho kuwa kale. Ama ugu yaraan isku day inaad.
Xeeladaha ay u isticmaali doonaan inay ku xoog sheegtaan kuwa kale ayaa ah:
Ku ceebeynta taageerayaasha anime iyaga oo ku khilaafsan iyaga.
Cayda taageerayaasha anime sababtoo ah isma arki karaan.
Ku dhaleeceynta waxyaabaha aad ku kala duwantihiin.
Iyo dhaqanka sunta guud ahaan.
Taageerayaasha Anime (iyo kuwa aan anime aheyn) ee aan aqbali karin kala duwanaanshaha fikirka ayaa ah kuwa ugu horeeya ee weerara kuwa kale. Iyagu waa kuwa xukuma laakiin neceb lagu xukumayo. Oo waxay u badan tahay inay leeyihiin.
Tani badanaa waa dabool wax qoto dheer, taas oo u horseedda qodobkeyga xiga.
2. Saadaalinta cilmu-nafsiga
Sida uu sharaxay Wikipedia:
“Saadaalinta cilmu-nafsiga waa hanaan difaac oo ay maskaxdu iskaga difaacdo kacdoonnada miyir-darrada ah ama sifooyinka iyagoo beeninaya jiritaankooda naftooda iyaga oo u nisbeeya kuwa kale.
Tusaale ahaan, cagajuglaynta waxaa laga yaabaa inay ku soo bandhigto dareenkooda u nugul bartilmaameedka. ” - Wikipedia
Ama si kale haddii loo dhigo - amni darro.
Gaar ahaan taageerayaasha Anime waa qaar ka mid ah kuwa ugu amni darada badan, weligeyna ma aanan fahmin sababta saxda ah. Laakiin maalin walba waan arkaa.
Hal qof ayaa la wadaagi doona ra'yigooda marka loo ogolaado in la yiraahdo, Twitter, iyo taageere kale oo anime ah ayaa ku boodaya oo weeraraya qofka si uusan ugu hogaansamin waxa uu aaminsan yahay.
Qaarkood waxay isku dayi doonaan inay si toos ah kuu ceebeeyaan, ama ereyo ay dameerkooda kala soo baxaan si ay 'kuugu xumeeyaan' oo ay kaa dhigaan inaad dareento kalsooni darro
Waxay isticmaali doonaan cudur daar kasta, erey kasta, cay, ama sheeko kasta oo buugga ku jirta si ay kuugu sheegaan sababta aad u qaldantahay.
Tani waa saadaalinta cilmu-nafsiga ah ee ugufiican, isla taageerayaasha isla markaana ku wacdiya 'midnimada' waa isla kan sameynaya.
Kaliya waa caadi in laga duwanaado ilaa intaad dhab ahaan ka fikir duwan tahay, markaa waa dhibaato si lama filaan ah.
Uma maleynayo in intooda badani xitaa ogaadaan inay yihiin kuwo xushmad leh sida ay ugu dhaqmaan bulshada anime. Laakiin way iska cadahay sida ay hoos ugula hadlaan dadka kale oo ay isu fidiyaan.
Elitist wuxuu u maleynayaa in eraygoodu yahay injiilka. Haddii tusaale ahaan, ay dhahaan Fullmetal Alchemist waa kan ugu fiican waqtiga oo dhan, iyaga oo aan ku raacsaneyn waxay kugu dejinayaan biyo kulul
Waxay sameyn doonaan wax kasta oo ay kugu qaadato si ay kaaga dhigaan inaad ka qoomameyso doorashadaada oo ay kaa dhigto inaad yar tahay.
Tani waxay dib ugu laabanaysaa qodobka # 2, Elitism-ka ayaa kaliya daboolaya kalsooni darrada qofka uusan garanaynin sida loola macaamilo. Oo sidaas daraaddeed waxay u cagajugleeyaan taageerayaasha kale ee anime oo ay u adeegsadaan dabadhilifyo.
La xiriira: Liiska Fannaaniinta Ugu Wanaagsan Anime (Iyo Fandoms) Waqtiga oo dhan
4. Maskax dhaqashada
waa inuu daawadaa anime waqtiga oo dhan
Markii wax walba la dhammeeyo oo la dhammeeyo, dadka qaar waxay dareemaan inay ku qasban yihiin adhiga oo ay u daba socdaan sida ido.
Waxay dareemayaan sida haddii aysan raacin waxa caanka ah, isbeddelka, ama 'nabdoon' ee lagu heshiiyo, waxay la macaamili doonaan dhammaadka qallafsan ee usha.
Waxay dareemayaan inay noqon doonaan:
Oo sidaas si layaableh, waxay raacayaan lo'da waxayna aakhirka ku sameynayaan waxyaabo isku mid ah kuwa kale oo iyagu iyagu isku dayayaan inay ka fogaadaan.
Isha ugu badan ee doodaha, xoogsheegashada, bulshooyinka sunta leh iyo xadgudubka internetka waxay ka soo jeeddaa inay ka hor tagto lo'da.
Ama si fudud u yeelashada ra'yi aan loo qaadaneyn in loogu yeero 'qabow' ama caan ku ah ilaaliyeyaasha irid-sameeyaha.
Sida loola macaamilo xoogsheegashada bulshada anime:
1. Kala saar kooxaha qaarkood ama golayaasha qaarkood
Waa ceeb laakiin waa run sidoo kale. Xaqiiqdu waxay tahay haddii aad rabto inaad iska ilaaliso dhaqanka sunta ah, adiga u baahan inaad ka go'do dadka iyo bulshooyinka sunta leh.
Bulshada anime kuma kala duwana. Taasina waa run xitaa haddii aan ka hadlayno dad aan anime ku jirin, laakiin jira sun ah dhanka warshadaha iyo taageerayaasha ku raaxeysta.
Haddii ay saaxiibo yihiin, waxaad u baahan tahay inaad isweydiiso haddii ay dhab ahaan yihiin saaxiibbadaada iyo haddii aad rabto inaad ka agdhowaato.
Hadday reer yihiin, waxa kaliya ee aad sameyn kartaa waa inaad xaddiddo waqtigaaga iyaga.
Qofkasta oo kale, oo ay kujiraan shisheeyayaal, ka tag naftaada:
Iyo meel kasta oo kale oo khadka tooska ah ee cagajuglaynta iyo sunta noocan ahi ku badan tahay.
2. Baro sida loola macaamilo oo u koro maqaarka qaro weyn
Waxyaabaha leh internetka ma aha sida cagajuglaynta khadka tooska ah. Haa waad xiri kartaa dadka internetka, aamusiin kartaa, aamusin kartaa, ama xitaa iska indho tiri kartaa…
Laakiin xaqiiqadu waxay tahay inay soo bandhigi karaan marar badan, iyagoo siinaya ra'yigooda aan loo baahnayn, sunta sunta ah si aad ugu degto neerfahaaga.
Dad murugo leh ayaa jira. Waxaa loo yaqaan 'trolls'. Waxayna sameyn doonaan wax kasta oo ay ku qaadaneyso raaxada taleefannadooda casriga ah ama kumbuyuutarka si ay kuu hoos ugu dhigaan heerkooda.
Joojinta waa nidaam aan waligiis dhammaanayn, laakiin sii kordhaya maqaarka qaro weyn iyo barashada sida loola macaamilo waa qiime la'aan. Weligiisna waara.
Waxaad ku kori kartaa maqaarka qaro weyn adoo:
Xaqiijinta nacaybku waxba kuma lahan adiga, waxay ku saabsan tahay naftooda.
Taageeraha cagajuglaynta ama taageeraha sunta ahi waa amni la'aan, oo wuxuu doonayaa inaad adigu dareento sidaasoo kale Haddii kale wax dhib ah kuma lahan adiga.
Ujeeddadooda ayaa ah inay kaa helaan jawaab celin. Waxay ku kobcaan feejignaanta si ay u dareemaan in la ansaxiyay.
Mahadcelinta noloshaadu ma gaarin heer ay tahay inaad yeelato xoogsheegasho inaad naftaada wanaag ku dareento.
U rajee kuwa ugu fiican.
Haddii aan laga xanaajin, waligeed waxba kuma lahan adiga haddii ay isku dayayaan inay ku caayaan ama ku ceebeeyaan.
3. U yeer dhaqan xun (hadaad madal leedahay)
Dhaqan xumo ayaa jirta marka qofku u dulqaato. Haddii aad u dulqaadato wax, adiga oo aan ogeyn ayaad kor u qaadaysaa.
Haddii aad kor u qaaddo, waad u oggolaaneysaa inuu ku kobco.
Tani waa sababta trolls ay u jireen muddo dheer. Halkii laga mamnuuci lahaa gebi ahaanba, waxaa loo oggol yahay inay ku tufaan sunta sunta ah meel kasta oo ay doortaan.
YouTube iyo 'qaar' shabakadaha kale ee bulshada waxay ku leeyihiin waqti adag sababta oo ah sida loo dhisay barnaamijyadooda.
Markii aad u dhawaaqdo dhaqanka xun, waxaad u soo jiidan kartaa si ku meel gaar ah, laakiin dib u riixid iyo feejignaan kugu filan, waad baabi'ineysaa gebi ahaanba.
Waxaad xad u dhigtay taas oo dhaheysa 'laguuma oggola inaad ka gudubto xariiqdan', taasina waxay xanibtaa oo ay joojisaa qulqulatooyinka iyo xoogsheegashada inay si xor ah ula baxaan
Haddii kale waxay ka baxaysaa xakamaynta qofna ma doonayo inuu qayb ka noqdo maaddaama ay sun aad u sarayso.
4Chan ama wax kastoo barta loogu yeero waxay u horseedaa wax sidaas oo kale ah.
La xiriira: Nacaybka Anime: Tani waa sababta Taageerayaasha Anime u helaan Nacayb Aad U Badan Sabab Wanaagsan
4. Ka hel khadka 'amaan' khadka tooska ah si aad ula wadaagto fikradahaaga
Qaabka internetka yahay iyo sida websaydhada iyo baloogyada qaarkood u shaqeeyaan, meelaha nabdoon way adkaan kartaa in la helo. Gaar ahaan haddii ay yihiin goobo caam ah.
Badanaa waad awoodaa oo keliya runti hayso meel aamin ah oo aad fikirkaaga kula wadaagto si gaar ah. Sida koox WhatsApp ah ama wax la xiriira.
Taas marka la dhaho, way jiraan oo doorashadaadu waxay kuxirantahay waxaad diyaar u tahay oo aad awoodid inaad wax kaqabato. Ku darso waxa aad tahay maya diyaar u ah inay wax ka qabtaan bulshooyinka anime.
Caafimaadka dhimirka waa # 1, sidaa darteed haddii ay jirto fursad aadan jabsan karin markay timaaddo fagaareyaasha bulshada, waxaa laga yaabaa in gaar loo leeyahay adiga ayaa kuu fiican.
Gaar ahaan haddii aadan diyaar u ahayn inaad wacdo trolls marka aad aragto.
Sideed ula macaamilaysaa xoogsheegashada ama fandoms sun ah warshadaha anime?
Elimeyaasha Anime, iyo Sida ay u baabi'iyaan bulshada Dhamaanteen
Ilaalinta Albaabka Anime, iyo Sababta ay Bulshadu u sameyneyso Wadada QALADA
jeexitaankii ugu fiicnaa nolosha anime 2016
liiska jeex nolosha anime
anime sida lagu sameeyo yaamayska
anime leh awood ka sarraysa iyo nolosha dugsiga